Hong Kong Inovhura Pasi Pose neNew 360 ° Virtual Reality
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Hong Kong Kupwanya Nhau » Hong Kong Inovhura Pasi Pose neNew 360 ° Virtual Reality
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Culinary • tsika nemagariro • Hong Kong Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Padyo padyo neguta muHong Kong, zvisikwa zviri padhuze kupfuura zvingafungidzirwe. Ichipenyesa mwenje pachishamiso ichi zvimwe chisingazivikanwe, iyo Hong Kong Tourism Board (HKTB) yakatanga "360 ° Hong Kong Moments" iri kuvhura guta kune nyika. Izvo zvisingawanzo zvemukati zveiyi chaiyo chaiyo firimu inoyeuchidza vafambi-vane nzara uye venguva yemberi vashanyi zvakanakisa uye zvese-zvinotenderera kuenda kuHong Kong.
Tarisa iyo HKTB's 360-degree VR firimu online kuti uzvinyudze mune zvakasikwa zveHong Kong:
Yokutanga munhevedzano ye360 ° Hong Kong Nguva dzakagadzirwa zvakanyanya kuratidza hukuru hweHong Kong kunze. Icho chaicho chaicho chiitiko chinotora vatariri parwendo rwekunyudza kuyambuka nharaunda yeHong Kong inoshamisa-nyore-kuwana-yakasvibirira. Paunenge uchiita bhaisikopo, munhu anogona kutarisa mudenga rinotyisa kubva pamusoro pezvikomo zvinokatyamadza uye nekuteerera kurira kunonzwika kwerwizi.
Kubva kuguta kuenda kumakomo, uye kubva kumahombekombe egungwa kusvika kumapaki, mifananidzo inokatyamadza inonyudza zvakakwana vateereri mumitinhimira nemanzwiro emapapu akasvibira eHong Kong, achiunza vateereri vepasirese padhuze neHong Kong sezvinobvira - zvisinei nekuti vari kupi nyika.
ONA ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA GEOPARK
Hong Kong iri kumba kune inovhenekera pfungwa-UNESCO World Heritage nzvimbo inozivikanwa seGlobal Geopark. Iyo izere nemasango emahombekombe egungwa uye maficha ekare ane zviwi zviwi zvakatenderedzwa pamhenderekedzo. Vashanyi vanogona kutora zvikepe kana kuhaya zvikepe kuti vashanyire mazhinji emahombekombe uye votarisa padyo nekubata matombo anoyevedza. Dzimwe dzesango zvakanyanya, zvinongogoneka kuzviona kubva pakachengeteka kwehunyanzvi.
PaDhaidhi Haven iboka rezvitsuwa rakakomberedzwa nemvura yakachena inonzwa kunge yeSouth Pacific kupfuura Hong Kong. Ingo tora chikepe kubva kuMa Liu Shui kuenda kuKat O kuti utange kuongorora ichi chakasarudzika chakasvibirira uye bhuruu kushamisika.
FAMBA UYE FAMBA PAMUSORO PENYAYA
PaEagle's Nest Nature Trail, vashanyi vanogona kutora chaiko kufamba padivi remusango kuburikidza neiyi thunzi nzira mukati meLion Rock Country Park. Iyo nzira inokutora iwe kungokwira zvakakwana kutora mumaonero akawandisa pamusoro peKowloon Reservoir, iri pakati peNew Territories makomo emakomo, uye kubatikana kweKowloon Peninsula. Kumusoro padhuze nemugwagwa, ona zvinokatyamadza maruva uye hupenyu hweshiri - ndiyo nzvimbo yekumhara yeBlack Kites - uye rimwe bhizimusi retsoko, futi!
Yakapedzwa muna 1910, iyo Kowloon Reservoir ndiyo yaive yekutanga muNew Territories uye ine yakasarudzika yakakomberedzwa dhizaini. Kukwira kumusoro kweGolden Hill Road uye Piper's Hill Road ndiyo nzira munhu anosvika nayo Eagle's Nest Nature Trail. Iyi nzira inotevera pamwe nerukova uye inotungamira iri nyore nzira yematombo.
GADZIRA WAKO WAKASHANIRA ZVINOGONESA
Pane bhasikoro, ndiko kuti, neyakagadzikana bhasikoro kukwira kuburikidza netsika uye nzvimbo dzekutandarira kubva kuYuen Long kuenda kuButterfly Beach. Kubva pakati peYuen Long, rwendo rwakareruka urwu kuenda kugungwa kuTuen Mun kunopa kusangana nemaruwa eHong Kong nemataundi matsva, vachitora nhaka yemagariro munharaunda yenzira dzekutenderera ingangoita nzira yese.
Wu Shan Varaidzo Nhandare Yemitambo inokukoka iwe kuti ubatanidzane zvakare nemwana wako wemukati uye utore kutenderera sezvo mweya unokwezva wegungwa uchipfuura nemumiti. Ndichiri kuchovha bhasikoro, munhu anogona kumira panzvimbo inofadza Butterfly Beach Park uye kunakirwa nejecha nemafungu anotenderera.
MVURA, MVURA KUNYIKA KWOSE
Kubva pakushambira mumvura yakajeka kusvika pakukwasva pamusoro pegungwa rinotonhorera, zviitiko zvemvura zvine chokwadi chekudzima mweya wekufamba-nyota. Vashanyi vanogona zvakare kutora kukwira kupfupi ku Sharp Island iri muHong Kong UNESCO Global Geopark. Ichi chidiki chiurefu chitsuwa chiri kumba kune zvigadzirwa zvegeological zvakagadzirwa makore emamirioni 140 apfuura. Izvo zvakakwana kune vashanyi kunakidzwa nechisikigo zvishamiso uye kutora kunyura mugungwa zvese mune imwe nzira.
Zviri nyore kukwereta kayak kubva kuSha Ha Beach uye padanho kuenda kune imwe yemahombekombe mazhinji paSharp Island kwezuva rekuzorora uchizeya pajecha rakasviba uye uchinyorovesa tsoka dzako mumvura yakajeka yebhuruu, kunyanya kana yapera. Uye Kiu Tsui Gungwa rinobatanidza matombo nejecha rakapfava inzvimbo yakanaka yekunakidzwa kwemvura senge scuba diving, kayaking, kushambira, uye kunyange kunze-kwemvura-sunbathing.
OH, RAKANAKA DZIMWE DZIMA
Wakamborota zvako wakanyanya kufungidzira kurara pasi peredzi muHong Kong? Kune nzvimbo dzakawanda dzakanaka dzekumisa tende uye musasa kwehusiku kana kwevhiki kubva kumahombekombe kusvika kunzvimbo dzechikomo. Uri mudhara wezuva here? Wobva waenda kuna Ham Tin Wan, rimwe remabhichi mana padhuze neMacLehose Trail, kwehusiku hwepamhenderekedzo yegungwa. Iwo mamwe mahombekombe - Sai Wan, Tai Wan, uye Tung Wan - zvese zviri nyore kusvika munzira dzakapfupika dzinove chikamu cheTai Long Wan nemabiko ayo anokatyamadza emeso kumabvazuva kwe Sai Kung Country Park.
Izvo zvakanaka zveino nzvimbo zvivakwa zviripo apo munhu anogona kukwereta mafashibhodhi pamwe nematende nemabhegi ekurara. Unoda kunakirwa nemoto unodziya? Ingotora huni dzekutengesa kuchitoro chepa-saiti uye kunyange kunakirwa nekurumwa kuti udye kuresitorendi.
ZVOKUDYA, CHOKUDYA CHINOKUDZA
Hapana rwendo chairwo rwunogona kunge rwakazadziswa pasina kukwanisa kunhuvira kuravira kwechinyakare madhishi emuno achibatanidza vashanyi kunhaka yetsika. Hong Kong izere nekunhuhwirira kwekunyepedzera kunozvimisikidza iwo mundangariro sedzakanaka ndangariro dzinofadza. Nzira dzekukwira makomo kazhinji dzinotungamira kumisha yekare yekuredza uko vashanyi vanogona kufamba-famba mumisika nematafura ezvokudya, nguva yese iyi vachitungamirwa nezvinonhuwirira zvakanaka.
Lamma ndicho chitsuwa chechitatu chikuru kuHong Kong uye chakazara nemaresitorendi kubva kuzvikafu zvegungwa zvechinyakare kusvika kuzvikafu zvemazuva ano zveWestern. Iyo ipfupi uye yakapusa kukwira uye ichaendesa symphony yemavhenekeri pane zvakajairika zvegungwa eateries. Chitsuwa ichi chakazadzwa neyemahara-yakasarudzika multicultural vibe uye inogara kune mahipster uye mhando dzekugadzira - inofadza kwete chete kune zvinonaka asi nemweya zvakare.
Uye iyo inzira inoshamisa yekutsanangura izvo zvinopihwa ne "green green" muHong Kong. Iwo mabiko epfungwa uye muyero wekusimudzira wepfungwa nemuviri.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro Kunze Kunze Hong Kong, tapota shanyirai: